१३ बर्षीय दलित बालिका विवाह गर्ने बयस्क पक्राउ « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » अन्य » १३ बर्षीय दलित बालिका विवाह गर्ने बयस्क पक्राउ
१३ बर्षीय दलित बालिका विवाह गर्ने बयस्क पक्राउ
२०७२ पुष १३, नेपालगन्ज- जागरण मिडिया सेन्टर
१३ बर्षीय बालिकालाई जर्वजस्ती भगाएर विावह गर्ने ४५ बर्षीय वयस्कलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले पक्राउ गरेको छ । १३ बर्षीय परियार थरकी बालिका विवाह गर्ने नेपालगन्ज–२६ बसुदेवपुरका ४५ बर्षीय घनश्याम पाल पक्राउ परेका हुन् ।
पालले दुई महिनाअघि स्थानीय जनता माविका कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने ती बालिकालाई जर्वजस्ती भगाएर विवाह गरेका थिए । बालिका विवाह गरेको आरोपमा शनिबार विहान ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले पालसंगै बालिकालाई पनि नियन्त्रणमा राखेको छ । बालिका आफन्तका अनुसार ४५ बर्षीय पालका घरमा पत्नि र चार छोराछोरी रहेका छन् । उनका २१ बर्ष उमेर पुगेका छोराछोरी रहेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डिएसपी राजीव बस्नेतले बालविवाह गर्ने पाल पक्राउ गरि नियन्त्रणमा राखिएको बताए । प्रहरीले बालिकाको स्वास्थ्य रिर्पोटका लागि अस्पतालमा पठाएको छ । प्रहरीले बालविवाह गर्ने पाललाई बालविवाह, बहुविवाह र जर्वजस्तीकरणी प्रकरणमा मुद्धा चलाउने तयारी गरेको छ । बालविवाहका बारेमा अनुसन्धान भैईरहेको बताउँदै उनले कानुन बमोजिम आरोपितलाई कारवाही हुने बताए । बालिका परिवारको जाहेरीका आधारमा गरिने उनले भने । बालिका आफन्त भने प्रहरी र स्थानीय राजनैतिक दलबाट विवाह मिलाउनुपर्ने दवाव आएको बताएका छन् । हामीलाई बालविवाह मिलापत्र गर्नुपर्यौ भन्दै स्थानीय नेताहरुबाट धम्की र दवाव आईरहेको बालिका आफन्त आशा विकले बताईन् । उनका अनुसार पालले विद्यालयमा पढ्नी गएकी ती बालिकालाई बजार घुमाउने लोभमा भारतमा पुगेर विवाह गरेका थिए ।
ती बालिकालाई विद्यालयबाट भगाएपछि उनी दुई महिना भारतको मुम्बईमा बसेका थिए । दुई दिनअघि घर पुगेका पाल प्रहरीको फन्दामा परेका हुन् । बालिकाका आफन्तले पाललाई बालविवाह र अपहरण मुद्धामा कारवाहीको माग गरेका छन् ।
By जागरण मिडिया सेन्टर in अन्य, समाचार on December 28, 2015 .
← कला निर्माण गर्ने हातहरु अझै अछुत !	वादी महिलालाई सहयोग गर्दै क्यारोला →